Wasiir Beyle oo xarigga ka jaray xarumo cusub - Horseed Media
Wasiir Beyle oo xarigga ka jaray xarumo cusub
“ Maanta labo xarumood ayaan xariga ka jarnay, Shantaan xarumood waxaa wehliya machad loogu tala galay in lagu barto canshuuraha, maamul wanaaga iyo maamulka Maaliyadeed oo aan isna dhawaan xariga ka jari doono”.
Ayuu yiri wasiirka Maaliyadda.
“ Dhab ahaan kaabayaashii dowladda oo dib u soo noolaanaaya waxa ay natusinaysaa soo noolaasho buuxda oo xaga dowladnimada ah. Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya iyo Wasiirka Maaliyadda si gaar ah ayaan uga mahadcelinayaa dadadaalka iyo dardarta ay wadaan oo ay dib ugu soo noolaynayaan kaalinta uga aadan
Ayuu yiri Guddoomiye Cumar Filish.
Dhaqaalaha ku baxay dib u dhiska Xurumahan oo gaaraya ilaa 7 xarumood oo loogu talagalay casnhuuraha ayaa waxaa bixiyey Bangiga Hormarinta Afrika (Africa Development Bank) oo Dowladda Soomaaliya ka cawinaya sidii loo xoojin lahaa, ilaha dhaqaalaha dalka iyo aqoonta howlwadeenada ka shaqeeya.
Ugu danbeyn Wasiirka maaliyaddu waxa uu xusay in xariga ay ka jari doonaan xaruntii turuba-taariyada ( hoggaanka illaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha) oo iyaduna ku burburtay qaraxyo dhowrjeer ka ag ka dhacay.